सरकार र विप्लव नेकपाबीच ३ बुँदे लिखित सहमति, के छ गोप्य सहमतिपत्रमा ? « Postpati – News For All
फागुन १९, काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता सुरु हुँदै छ।
दुवै पक्षले मंगलबार आआफ्ना तर्फबाट दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन्। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो।
सरकार र विप्लव समूह दुवैले मंगलबार वार्ता समूह गठन गरेका हुन्। सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवको वार्ता टोलीको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्माले गरेका छन्। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा लेखेका छन् ।